Resabe tsy mampandroso | NewsMada
Resabe tsy mampandroso
Par Taratra sur 19/04/2017
Naresaka tato ho ato ny fivoizana fitsikerana sy fanaratsiana ny Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly (Bianco), taorian’ireny « Raharaha Claudine » ireny. Hoe nahoana, hono, hatramin’izay tsy nihetsika fa izao vao manovokovoka ? Ao koa ny hoe « fa angaha Claudine ihany no nanao kolikoly hatramin’izay fitondrana nifandimby izay? », sns. Dia lasa ny saina. Tsy hita ihany Ramalagasy ity. Na manao na tsy manao toa ananan-tsiny foana. Fomba fiteny ihany io, fa raha ny marina, na raha ny fahitana azy hatramin’izay, azo lazaina ho nanao ny asany hatrany ny Bianco.
Manamporofo izany ireo raharahan-kolikoly maro efa nanaovana fanadihadiana sy famotorana, saingy rehefa vita ny andraikiny ka atolotra ny mpitsara mpanao famotorana ny raharaha dia ireny efa niaraha-nahita ireny hatrany ny tohiny. Na votsotra ho azy eo ilay voampanga, na mahazo fahafahana vonjimaika,… Misy aza no very anjavony fotsiny amin’izao.
Amin’ity “Raharaha Claudine” ity, ny hita tsapa, mahazo rariny na mahazo naoty tsara amin’ny ankamaroan’ny vahoaka ny Bianco, na eo aza ny famendrofendroana isan-karazany. Eny fa na ireo fikambanana iraisam-pirenena, ahitana ireo firenen-dehibe koa aza, manohana sy mankahery hatrany ny Bianco. Tsy mahagaga izany, satria anisan’ny fepetra takian’ny vondrona iraisam-pirenena sy ireo mpamatsy vola vahiny ny tsy maintsy hirosoana sy hanohizana ny ady amin’ny kolikoly. Ankoatra ny hoe fanjakana tsara tantana, sns.
Fa amin’ny fijery malalaka na fijery ankapobeny, tsy tokony ho azo leferina na ekena ny fisian’ny tsimatimanota, ny fanaparam-pahefana sy ny fanamparan-kery. Raha tena ao anatin’ny fo amam-pahin’ny rehetra, indrindra ny mpitondra sy manampahefana ny fampandrosoana marina ny firenena, tsy tokony hisy ny ambonin’ny lalàna. Resaka be ny ankoatra izay! Resabe… tsy mampandroso.